Forex Warrior Review - Best Forex Who Am si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
HomeForex Warrior EAForex Warrior Review
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Forex Warrior EA 0
Nyochaa Forex Warrior EA - Onye Ọkachamara Ọkachamara Nlele Maka Nnukwu Uru FX Trading
Forex Warrior EA bụ uru FX ọkachamara Advisor Onye ahịa na-echekwa Grid bara ọgaranya site na Argolab otu, The Forex robot ahia n'otu oge n'ogologo ma dị mkpirikpi site na iji usoro nlezianya a họọrọ nke martingale.
A na-agbakwụnye ahịa na nkata site na iji ngwụcha azụta Nkwụsị / Sịpụta iwu. Iji ikikere echere na-eme ka e nwee usoro zuru ezu nke nkata ma na-ezere iwepu iwu ahịa n'oge mmeghari ego ngwa ngwa.
Forex Warrior EA nyochaa ahịa ma gbanwee ọnụọgụ ahịa na ọkwa dịka ntụziaka nke isi ihe. Ụdị atụmatụ "ahia na-emekarị" pụrụ iche na-eme ka EA gbasaa uru gị ma belata nkwụsị. Usoro iwu ahia niile mepere ọkachamara Advisor e kenyere onye stoploss etoju.
a FX robot ga-arụ ọrụ nke ọma na ọtụtụ ndị na-ere ahịa, 4-digits na 5-digits alike. Ị nwere ike ịhọrọ onye na-ere ahia na obere mgbasa. Ọ bụrụ na nkwụnye akaụntụ gị ezughị oke maka nhazi usoro ego, ị nwere ike ịchọ iji akaụntụ ego. Nke a ga - egbochi gị ịhọrọ onye na-agba ahia, n'ihi na ọ bụghị ha nile na-enye ego akụkọ.
The Forex Warrior EA e mepụtara site otu ọkachamara otu ndị ahịa na-achọ ịhụ gị ịga nke ọma!
Forex Warrior EA - Amabughị Azụmaahịa FX?
Jiri nke Forex Warrior EA na-atụgharị gị ego n'ime ọlaedo!
Forex Warrior EA - Banyere Tragic Logic, Mbido na ihe ndị ọzọ chọrọ
Forex Warrior EA bụ otu n'ime nnọọ ole na ole FX robots nke ahụ gosipụtara na ha bara uru ruo ogologo oge nke ịzụ ahịa ndụ. Atụla obi n'okwu, jiri anya gị hụ anya! N'okpuru ebe a, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ nyochaa ego n'ezie, ụfọdụ n'ime ha na-agba ndụ ruo otu afọ ugbu a. Eziokwu ahụ bụ na ndị a bụ ezigbo ego na akaụntụ na-akwado site ọrụ onwe Myfxbook. I nwekwara ike ịhụ nke a site na iwepụ ego site n'akụkọ ahụ.
The ntakiri ego ahia na Forex Warrior EA is
Mgbe $ akaụntụ na di ntakiri ọtụtụ 0.01 (= $ 1000) $ 10,000
Pasent akaụntụ na di ntakiri ọtụtụ 0.1 (= 10,000 cents = $ 100) $ 1,000
Pasent akaụntụ na di ntakiri ọtụtụ 0.01 (= 1,000 cents = $ 10) $ 100
DỊ MKPA: Ọ bụrụ na gị ego bụ ihe na-erughị $ 10,000, ị ga-eji a pasent akaụntụ!
Ọ bụrụ na ị na-erekwa na di ntakiri ego, ị kwesịrị ị na-esetịpụrụ amalite ọtụtụ ndị di ntakiri ọtụtụ size, ahia otu ego ụzọ naanị (kasị mma, GBPUSD) na anyị nwere ike ikwu na ị na-eji otu n'ime ndị ala-na-ize ndụ tent.
Forex Warrior EA - Eji otu esi eji Sistemụta Azụmaahịa Forex a bara uru
Maka ezigbo arụmọrụ (uru / ize ndụ), anyị na-akwado iji ego nke 30,000 (ya bụ, 3 ugboro nkwụnye ego) ma ọ bụ ibu na ahia n'otu oge ọnụahịa abụọ 3. Nhọrọ dị mma maka ụzọ abụọ ego nwere ike ịbụ 1. GBPUSD, 2. EURUSD or EURGBP, na 3. AUDUSD or NZDUSD. Ọzọ ezi nhọrọ pụrụ ịbụ na-agba ọsọ 2 mbipụta nke EA dị iche iche na ntọala (ma anwansi nọmba !!) on GBPUSD na otu oyiri on EURUSD.
The na-atụ aro na-amalite ọtụtụ size bụ 0.01 kwa onye ọ bụla 10,000 nke gị ego na onye ego ụzọ. Eg, ma ọ bụrụ na gị nkwụnye ego bụ $ 30,000 na ị na-erekwa 3 ego ụzọ abụọ, ndị na-amalite ọtụtụ size kwesịrị 0.01.
Forex Warrior EA na-arụ ọrụ nke ọma na ọtụtụ ndị na-ere ahịa. Naanị ndị ọzọ bụ ndị na-agbazi NFA: Forex Warrior trades ma ogologo na mkpirikpi n'otu oge, nke ndị NFA na-ekweghị. N'ozuzu, ihe dị elu (1: 300 ma ọ bụ karịa) dị mma, ebe ọ na-ebelata oke ọrụ na nkwụnye ego gị. Ọ bụrụ na nkwụnye ego gị na-erughị $ 10,000, ị ga-eji akaụntụ ego, ya mere, ịchọrọ ịchọta onye na-ere ahia, nke na-enye cent akaụntụ.
Forex Warrior EA - N'ebe a, ị nwere ike ịhụ Onye Ndụmọdụ Ọkachamara a:
Nke a bụ otu n'ime nnọọ ole na ole robots na gosipụtara na ha uru ruo ogologo oge nke ndụ trading. -Adịghị atụkwasị obi na okwu, lee gị anya!
Forex Warrior EA Kwesịrị ịnọgide na-arụ ọrụ 24 awa kwa ụbọchị site na mmepe ahịa na Monday na ahịa na-emechi na Friday. Anyị na-atụ aro ka anyị nwee ike ịtụkwasị obi Virtual Privat Server (VPS).
E nwere nnọọ olileanya na-adịghị ize gwụsịrị na Forex Warrior EA n'ihi na creators nke a software nkwa a karịa 62% ịga nke ọma ọnụego na ga-enye Verified pụta.
Forex Warrior EA bụ n'otu ntabi dị na unbelievable price, ie naanị $ 179. Ya mere echela ka jidere gị oyiri!
Gaa Leta Official Forex Warrior EA website